Madaxwaynihii Hore ee Galmudug, Guuleed oo difaacay Sh Nuur Baaruud, xilli ay Xildhibaano ku eedeeyeen inuu sameeyay Kicin Bulsho ka dhan ah Baarlamaanka. – Hornafrik Media Network
Xiligii Kacaankii Maxamed Siyaad Barre Waxuu ka mid ahaa Sheekhu dadkii hor istaagay oo si cad oo aan dhuumasho laheyn uga horyimid Siyaasadahii qaldana ee Kacaanka xili waliba aan lagu dhicin in lagu dhiirado Kacaankaas, asagoo ku muteysyay in lagu xukumo DIL TOOGASHO AH.
Xiligii Hogaamiye Kooxeedyada waxuu ka mid ahaa Sheekh Nuur dadkii Calanka u siday wax ka badalka Xaaladaas.
Xiligii Maamulkii Cabdulaahi Yuusuf Sheekhu sidoo kale waxuu ahaa dadkii sida Cad oga hor yimid soo galinta Ciidamadii Itoobiyo gudaha Dalka Soomaaliya, waxuu ka mid ahaa Culumadii Muqaawamada iyo Kacdoonka Bulsho hogaaminaysay.
Xiliyadii Maamulkii Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh sidoo kale Sheekhu had iyo jeer waxuu sheegi jiray waxa uu u arko inay sax tahay asagoon cidna ugu aabo yeelaynin waxaana u maleynayaa in aad loo wada xusuusto hadlkii uu Sheekhu ka yiri “Madaxweyne Xasan Sheekh hortiisa oo ahaa ” Madaxweyne Doorashadaada iyo Doogaaga Masuuliinta ayaa xun”.
WQ: Cabdikariim Xuseen Guuleed
Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug
Xog: Siyaasiin Caan ah oo Qaarkood ay Xilalka Dalka ugu sareeya hayaan oo loo diiday inay galaan Madaxtooyadda Somalia.